फोरम राजपा एकिकरण हुँदै : फोरमसँग एकता गर्न राजपाले बनायो समिति « Light Nepal
Published On : 22 March, 2019 8:43 pm
काठमाडौं, ८ चैत । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीले एकिकरणको तयारी गरेका छन् । फोरमले राजपालाई बिनासर्त एकीकरण प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग पार्टी एकता वार्ता गर्न राजपाले वार्ता समिति बनाएको छ । दुबै पार्टीबीच एकताका लागि पत्र आदान प्रदानपछि वार्ता गर्नका निम्ति समिति निर्माण गरिएको हो । शुक्रबार बसेको पार्टीको अध्यक्ष मण्डल बैठकले फोरम नेपालसँग वार्ता गर्नका लागि समिति गठन गरिएको पार्टीका महासचिव केशव झाले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीमा वृषेशचन्द्र लाल, रमेश यादव, सुनिल रोहित र केशव झा सदस्य छन् । फोरमले पनि राजपा लगायतसँग वार्ताका लागि उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । राजपा महासचिव झाले छिट्टै वार्ता शुरु गरिने जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिले पत्राचारका कामहरु भइरहेको छ । हामी चाँडै वार्ता पनि गर्छौं ।’
दुवै पार्टीबीच एकीकरण विषय अघि बढिरहँदा पार्टी अध्यक्ष तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले राजपलाई जवाफी पत्र पठाउँदै विना सर्त वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए । ‘हामीहरुमध्ये कोही सरकारमा र कोही प्रतिपक्षमा रहेकै कारणले मात्र पार्टी एकीकरणजस्तो महत्वपूर्ण सवालमा बाधा अवरोध हुनुहुँदैन’, पत्रमा भनिएको छ, ‘यो नीतिगत सवाल नभई रणनीति तथा कार्यनीतिक मात्र सवाल हो जुन परिवर्तन भइरहन्छ।’
फोरमले २०७५ चैत ६ गतेको मितिमा अध्यक्ष यादवले हस्ताक्षरसहितको पत्र पठाएको हो। सरकारमा रहने वा प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने निर्णय गर्न एकीकरणपछि बन्ने नयाँ पार्टीलाई जिम्मा दिनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ। ‘सरकार वा विपक्ष कहाँ रहेर के कार्य गर्ने, कस्तो भूमिका खेल्ने ? एकीकरणपछि बन्ने पार्टीले निर्णय गरेअनुसार हुनेगरी पार्टी एकीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउन सकिन्छ’, पत्रमा भनिएको छ।
यसअघि राजपाले एकीकरण प्रक्रियामा अघि बढ्न सरकार छोड्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो। फोरमले त्यसको जवाफ दिएको हो। प्रदेश नं. २ मा सत्ता चलाइरहेका दुवै पार्टीले गत वर्ष भएको निर्वाचन एउटै मोर्चा बनाएर चुनाब लडेका थिए। त्यो गठबन्धनले तराईका जिल्लामा उत्साहजन सफलता पाएको थियो।
पार्टी एकीकरणका लागि राजपाले संघीय समाजवादी फोरमले ओली सरकार छोड्नुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ। सरकारमा रहेको अवस्थामा पार्टी एकीकरण वार्ता हुन नसक्ने उसको अडान छ। तराई केन्द्रित भएर बिखण्डनको मुद्दा उठाउँदै आएका सीके राउत संविधान र मुलुकको अखण्डता स्वीकार्दै मूलधारको राजनीतिमा आएपछि तराईका यी दुई पार्टीबीच एकताका लागि पत्र आदान–प्रदान भइरहेको हो।
राप्रपाद्वारा राजमार्ग र चोकहरुमा सत्याग्रहको कार्यक्रम स्थगित दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारी
काठमाडौं, वैशाख ७ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आइतबारको लागि तय गरेको राजमार्ग र
मुलुक विकासको बाटोमा अघि बढेको देखेर विरोधीहरुले भ्रम फैलाउन थाले: प्रधानमन्त्री ओली
बुटवल, वैशाख ७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक विकासको बाटोमा अघि बढेको देखेर विरोधीहरुले